Waa imisa miisaaniyadda maamulka Puntland ee sanadka 2020-ka? – Kalfadhi
Maamulka Puntland ayaa sanadka 2020-ka waxaa uu yeellan doonaa miinaasiyadii ugu badneyd taariikhda maamulkaasi.
Baarlamaanka Puntland ayaa shalay oo taariikhda ay ku beegneyd 19-ka bisha November waxaa la horgeeyay miisaaniyada sanadka soo socda ee maamul Goboleedka Puntland.
Wasiirka Maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa mudanayaasha Baarlamaanka Puntland u akhriyay Miisaaniyadda dowladda ee sannadka 2020-ka oo gaareysa $ 346,416,158.99 malyan oo Dollar.
Miisaaniyadan oo ah tii ugu badneyd ee abid uu Maamulka Puntland horgeeyo baarlamaanka ayaa todobaadkan waxaa ansixiyay Golaha Wasiirada.
Wasiirka Xasan Shire, oo xildhibaannada Baarlamanka u akhriyay warbixinta Miisaaniyadda dowladda ee 2020-ka, ayaa sheegay in wasaaraddu ay baahiyaha as’aasiga ah iyo sida ay u kala mudan yihiin, ay ku salaysay Miisaaaniyadda, iyadoo lagu xisaabtamayo dakhliga lasoo xarayn karo iyo caawimaada la heli karo.
Maamulka Puntland ayaa waxaa uu sameynayaa kobac dhaqaalle, taas oo sare u qaadi karta dhaqaallaha deegaannada maamulkaasi, sida ay shegeen falanqeeyayaasha dhaqaallaha ee dalka Soomaaliya.
Haddii baarlamaanka uu ansixiyo miisaaniyadaasi waxaa uu maamulka abuuri doonaa shaqooyin ay ka faa’iideystaan dhallinyaradda ku nool deegaannada Puntland, sida maamulka uu sheegay.